फास्फेटिडेल्सेरिन लिने शीर्ष Bene फाइदा (PS) -अधिकारिय
घर > फास्फेटिडेल्सिन (PS)
हाम्रो विचारमा, phosphatidylserine कफ्टटेकबाट बजारमा हाल उपलब्ध उत्तम पूरक हो। हामी यस छनोटको समर्थनमा हाम्रा कारणहरू प्रस्तुत गर्दछौं। सबैभन्दा पहिले, यो पूरकले पैसाको लागि उत्तम मूल्य प्रस्ताव गर्दछ - सुपर-महँगो उत्पादनहरूको समुद्रीमा, यो फास्फेटिडेल्सेरिन पूरक सस्तो पक्षमा खस्छ। दोस्रो, Cofttek द्वारा यो पूरक एक निरीक्षण सुविधा मा बनेको छ र यसैले, यसको गुणवत्ता परीक्षण गर्न सकिन्छ। उत्पाद शुद्धताका साथै क्षमताको लागि पनि परिक्षण गरिएको छ। त्यसोभए, यदि तपाई राम्रो फास्फेटिडेल्सेरिन सप्लीमेन्ट किन्नको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् cofttek.com.
फास्फेटिडेल्सरिन (PS) के हो?
फास्फेटिडेल्सिन केको लागि राम्रो हो?
के फास्फेटिडेल्सेरिनले वास्तवमै काम गर्दछ?
के फास्फेटिडेल्सेरिनले तपाईंलाई निन्द्रा बनाउँछ?
फास्फेटिडेल्सिनका फाइदाहरू के हुन्?
फास्फेटिडेल्सेराइनको संरचना के हो?
हामीलाई फास्फेटिडेल्सेराइन किन आवश्यक छ?
फास्फेटिडेल्सेरिन (PS) को उपयोग के हो?
मलाई कत्ति धेरै फास्फेटिडेल्सेराइन कम कोर्टिसोलमा लिन पर्छ?
तपाईं कोर्टिसोल स्तर कसरी कम गर्नुहुन्छ?
तपाईको शरीरमा कोर्टिसोल के हो?
सोया लेसिथिनमा कती फास्फेटिडेल्सेरिन हुन्छ?
तपाईंले कहिले फास्फेटिडेल्सेरिन लिनुहुन्छ?
के फास्फेटिडेल्सेरिन राती लिनु पर्छ?
काम गर्न सुरू गर्न फास्फेटिडेल्सेरिनलाई कति समय लाग्छ?
फास्फेटिडेल्सिनका साइड इफेक्टहरू के हुन्?
एल सेरीन र फास्फेटिडेल्सेरिन बीच के भिन्नता छ?
के कारण सेरीनको कमी हुन्छ?
एल टायरोसिनले शरीरको लागि के गर्छ?
सेरीनको काम के हो?
कुन फूडहरू फस्फेटिडेल्सिनमा उच्च हुन्छन्?
फास्फेटिडेल्सिनका स्वास्थ्य लाभहरू के हुन्?
कसरी फास्फेटिडेल्सेरिनले अपोपोटोसिसको मार्करको रूपमा कार्य गर्दछ?
के फास्फेटिडेल्सरिन एक एमिनो एसिड हो?
फास्फेटिडेलेथोलामाइनको प्रमुख भूमिका के हो?
के तपाईसँग धेरै कोलीन हुन सक्छ?
के फास्फेटिडेल्सरिन एक लिपिड हो?
फास्फेटिडेल्कोलीन के को लागी प्रयोग गरीन्छ?
के फास्फेटिडेल्सेरिन zwitterionic हो?
के फास्फेटिडेल्सेरिन फास्फेटिडेल्कोलीन जस्तै हो?
के फास्फेटिडेल्कोलीनले कम कोलेस्ट्रोल खान्छ?
के फास्फेटिडेल्सेरिनले वजन घटाउन सहयोग गर्दछ?
के फास्फेटिडेल्सरिन (PS) सुरक्षित छ?
कहाँ थोकमा Phosphatidylserine (PS) पाउडर खरीद गर्ने?
फास्फेटिडेल्सिन (PS) एक फास्फोलाइपिड र एक कम्पाउन्ड हो जुन प्राय: मानवीय न्यूरल टिश्यूमा पाइने एक आहार फाइबरको धेरै नजिक छ। फोस्फेटिडेल्सेरिनले थक्की गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र संज्ञानात्मक कार्यको लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि फास्फेटिडेल्सेरिनले स्नायु कोषहरू बीचको सन्देशहरूको स्थानान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
औसतमा, एक पश्चिमी आहारले दिनहुँ १ 130० मिलीग्राम फास्फेटिडिलसेरिन आपूर्ति गर्दछ। माछा र मासु फस्फेटिडेल्सेरीनको राम्रो स्रोत हो, जुन दुग्धजन्य उत्पादन र तरकारीहरूमा विरलै मात्रामा पनि पाइन्छ। सोया लेसिथिन फास्फेटिडेल्सेरिनको अर्को राम्रो स्रोत हो। यद्यपि, फास्फेटिडेल्सेरिन शरीरले संश्लेषित गर्नका साथै प्राकृतिक स्रोतको रूपमा आहार मार्फत खपत गर्न सक्दछ, प्राथमिक अनुसन्धानले देखाउँदछ कि यसको स्तर उमेरसँगै घट्छ। यस प्रकार, आजका दिनहरू, फास्फेटिडेल्सेरिन पूरकको प्रचार-प्रसार गरिन्छ, विशेष गरी बुढा व्यक्तिहरूमा स्मृति र संज्ञानात्मक प्रकार्यमा कुनै गिरावट दर्ता गर्दछ।
पछिल्ला केही वर्षहरुमा, फास्फेटिडेल्सेरिन सप्लीमेन्टहरुको माग बृद्धि भएको छ किनकि फस्फेटिडेल्सेरिन सप्लीमेन्टहरु एक बिरामी अवस्थाको लागि प्राकृतिक उपचार मानिन्छ, जस्तै चिन्ता, अल्जाइमर, ध्यान घाटा-hyperactivity अस्वस्थता, डिप्रेसन, तनाव र मल्टिपल स्क्लेरोसिस। त्यो भन्दा टाढा, फास्फेटिडेल्सेरिन सप्लीमेन्टहरू पनि शारीरिक आउटपुट, व्यायाम प्रदर्शन, मुड र निद्रा बृद्धि गर्न जानिन्छ।
यस लेखमा, फस्फेटिडेल्सेरिनका थुप्रै मुख्य कार्यहरू र फाइदाहरूबारे छलफल गर्नुको साथ हामी बजारमा उपलब्ध उत्तम फास्फेटिडेल्सेरिन पूरकको खुलासा गर्न गहिराइ पनि खन्नेछौं।
फास्फेटिडेल्सेरिन लिदा z-१२ हप्ता उपचार पछि अल्जाइमर रोगका केहि लक्षणहरू सुधार गर्न सक्दछ। यो कम गम्भीर लक्षण भएका मानिसहरूलाई अधिक प्रभावशाली देखिन्छ। यद्यपि, फास्फेटिडेल्सेरिनले विस्तारित प्रयोगको साथ यसको प्रभावकारिता गुमाउन सक्छ।
फास्फेटिडेल्सेरिन एक फास्फोलिपिड न्यूट्रिशियल सप्लीमेन्ट हो जसले शरीरमा कोर्टिसोलको उच्च गतिशील उत्पादन रोक्दछ, जसले अस्वस्थ, माथि उठेको कोर्टिसोलको स्तर घटाउँछ, र यसको फलस्वरूप, अधिक आरामदायी निन्द्रा आउँछ।
हामी Phosphatidylserine (PS) का केहि मुख्य फाइदाहरू हेरौं:
C यो संज्ञानात्मक अस्वीकार र डिमेन्शिया बिरूद्ध एक प्रभावी उपचार विकल्प हो
जनावरहरूमा गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाए कि फस्फेटिडेल्सेरिनको लामो पूरकले या त संज्ञानात्मक गिरावटको दरलाई कम गर्दछ वा यसलाई पूरै मुसामा उल्ट्याउँछ। यी सकारात्मक निष्कर्षहरू पछाडि, मानवमा फास्फेटिडेल्सेराइन सेवनको प्रभावको विश्लेषणको लागि अध्ययनहरू गरिएको थियो र धेरै अध्ययनहरूले अल्जाइमरका बिरामीहरूलाई २०० मिलिग्रा इंट्रावेनस पूरक डोपामाइन र सेरोटोनिनको स्तर बढाउँदछ भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गरे, दुई हार्मोनले अन्य महत्वपूर्ण ह्रासलाई दर्ता गरे। सर्तको कारण। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, फास्फेटिडेल्सेरिनले ग्लुकोज मेटाबोलिज्म जोगाउने प्रमुख कार्य गर्दछ, जसले रोगबाट पनि राहत प्रदान गर्दछ। (२) प्रकाशित: फास्फेटिडेल्सेरीन र मानव मस्तिष्क
। यो यसको Nootropic प्रभाव को लागी सामान्य प्रयोग गरीन्छ
फास्फेटिडेल्सेरिन पूरक पुरानो मानिससँग तिनीहरूको ध्यान बढाउनको साथसाथै गिरावट गर्ने सोच्ने सीपहरू सिफारिस गरिन्छ। पहिलो अनुसन्धान जसले गैर-पैथोलॉजिकल मानसिक अशक्तता भएका बुढापाका मानिसहरुमा memory००mg सोया-आधारित फस्फेटिडेल्सेरिन सेवनमा सुधार गरिएको दृश्य मेमोरीको साथ linked०० मिग्रा जोड्ने फोरफेटिडेल्सेरिनको प्रभावको अध्ययन गर्‍यो। अझै अर्को अध्ययनले माछाको तेल फस्फेटिडेल्सेरिनको स्मृतिमा परेको प्रभावको मूल्या and्कन गरेको छ र पत्ता लगाएको छ कि फास्फेटिडेल्सेरिन पूरकले पुरानो मानिसमा तुरून्त शब्द पुन: याद गर्ने कार्यमा 300२% सम्म सुधार गरेको छ। तसर्थ, Phosphatidylserine निश्चित रूप मा शरीर मा एक nootropic प्रभाव छ। जे होस्, उमेर सम्बन्धित मेमोरी नोक्सन रोक्न प्लान्ट-व्युत्पन्न फस्फेटिडेल्सेरिनको प्रभावकारितामा अनुसन्धान सीमित छ र यस क्षेत्रमा अझ बढी कामको आवश्यक छ।
Osp फास्फेटिडेल्सेरिन सेवन बृद्धि व्यायाम प्रदर्शनसँग सम्बन्धित छ
स्पोर्ट्स मेडिसिनमा प्रकाशित एउटा रिपोर्टले पत्ता लगायो कि फस्फेटिडेल्सेरिन पूरक सुधार एथलेटिक प्रदर्शन र व्यायाम क्षमतासँग जोडिएको छ भनेर प्रमाणित गर्न पर्याप्त प्रमाणहरू छन्। यस अध्ययनमा यो पनि भनिएको छ कि नियमित फास्फेटिडेल्सेरिन पूरकले मांसपेशियोंको दुखाइ कम गर्दछ साथै चोटपटक लाग्ने जोखिम पनि कम गर्दछ। त्यस्तै, अर्को अध्ययनले पत्ता लगायो कि osp हप्तासम्म फास्फेटिडेल्सेरिन पूरकको प्रयोगले गोल्फहरूले कसरी टिकेका र क्याफिन र भिटामिनको साथ फास्फेटिडेल्सेरिन मिलाउँदा व्यायाम गरेपछि थकानको भावना कम हुन्छ। यद्यपि यो दिमागमा राख्नुपर्दछ कि यी सुधारहरू धेरै चिन्ह लगाइएको छैन।
Osp फास्फेटिडेल्सेरिनले डिप्रेसनसँग लड्न मद्दत गर्दछ
२०१ 2015 मा, मानसिक रोगमा प्रकाशित एउटा अध्ययनले पत्ता लगायो कि 65 XNUMX बर्ष भन्दा माथिका मानिसहरुमा, नियमित फास्फेटिडेल्सेरिन, डीएचए र EPA सेवनले डिप्रेसन कम गर्न सक्छ। त्यस्तै, अर्को अध्ययनले पत्ता लगायो कि फास्फेटिडेल्सेरिन पूरकले कसरत सत्र पछि तनाव-प्रेरित कर्टिसोल अर्थात् तनाव हर्मोनको स्तर घटाएर सन्तुष्टि र खुशीको भावनालाई बढावा दिन्छ।
Children यो बच्चाहरूमा एडीएचडीको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ
२०१२ को अध्ययनले एडीएचडी वा ध्यान घाटा हाइपर्याक्टिभिटी डिसअर्डर भएका बच्चाहरूमा फास्फेटिडेल्सेरिनको प्रभावको अध्ययन गरेको थियो। एडीएचडीका साथ २०० बालबालिकाले उक्त अध्ययनमा भाग लिए, जसले ओमेगा 2012 फ्याटी एसिडहरूको संयोजनमा फोस्फाटिडिलसेरिन प्रयोग गरेर १ weeks हप्ताको उपचार एडीएचडीको उपचारमा प्रभावकारी भएको निष्कर्षमा पुगे। बच्चाहरूले यस संयोजनलाई कम हाइपरक्टिभ वा आवेगपूर्ण ब्यवहार र बृद्धि मूड दर्ता गरे। २०१ 200 मा, अर्को अध्ययन एडीएएचएबाट पीडित children 15 केटामा दुई महिनासम्म फास्फेटिडेल्सेरिनको प्लेसबोमा विश्लेषण गर्नको लागि गरिएको थियो। अध्ययनको अन्त्यमा, उपचार समूहले सुधारिएको मेमोरी र ध्यान प्रदर्शन गर्‍यो।
माथि उल्लेखित लाभहरू बाहेक, फास्फेटिडेल्सेरिन पूरक सुधार एनेरोबिक चालु क्षमता, थकान कम गर्न र उत्तम प्रशोधन शुद्धता र गतिसँग पनि जोडिएको छ।
Phosphatidylserine एक phospholipid हो - अधिक विशेष गरी एक glycerophospholipid - जसमा ग्लिसरोलको पहिलो र दोस्रो कार्बनमा एस्टर लिंकेजमा जोडिएको दुई फ्याटी एसिडहरू हुन्छन् र ग्लिसरोलको तेस्रो कार्बनसँग फस्फोडिएस्टर लिंकेज मार्फत जोडिएको सेरीन।
केही दिनहरू, हाम्रो मस्तिष्क यस्तो महसुस भयो जस्तो लाग्छ र कुनै कार्य गर्न सक्दैन। धेरै जसो अवस्थाहरूमा, यो अस्वीकृत संज्ञानात्मक समारोहको कारणले हुन्छ, जुन राज्य बढि बूढा मानिसहरूका लागि सामान्य हो तर युवा वयस्कहरूमा असामान्य हुँदैन। विगत केही वर्षहरुमा, वैज्ञानिकहरु र अनुसन्धानकर्ताहरु फास्फेटिडेल्सेरिनको क्षमता कम भएको संज्ञानात्मक समारोहको उपचार गर्न ठूलो विश्वास देखाएका छन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यस क्षेत्रमा बढ्दो अनुसन्धानले मानिसहरूलाई फास्फेटिडेल्सेरिनका अन्य फाइदाहरूमा पर्दाफास गर्‍यो, जस्तै यसको अल्जाइमर रोग र एडीएचडी जस्ता सर्तहरूको उपचार गर्ने क्षमताको साथै निद्रालाई बढावा दिन र मुड बढाउने क्षमतामा।
फास्फेटिडेल्सेरिनले मानव शरीरको लागि के गर्छ भन्ने बारे जान्नु अघि, पहिले हामी फास्फेटिडेल्सेरिन (PS) के हो बुझ्दछौं।
पछिल्ला केही वर्षहरुमा, फास्फेटिडेल्सेरिन पूरकहरूको माग धेरै बढेको छ किनकि फास्फेटिडेल्सेरिन (PS) को बिभिन्न प्रयोगहरुका कारण। शुरुवातकर्ताहरूको लागि, फास्फेटिडेल्सेरिन संज्ञानात्मक समारोह वृद्धि गर्न र संज्ञानात्मक गिरावटलाई कम गर्नमा धेरै प्रभावकारी छ। यसै गरी, यसले बच्चाहरूमा र वयस्कहरूमा एडीएचडीको बिरूद्ध पनि प्रभावकारी देखाइएको छ र शरीरमा कोर्टिसोलको स्तर घटाएर व्यायाम-प्रेरित तनावलाई कुशलतासाथ व्यवहार गर्दछ। यो एक व्यक्तिको ध्यान, कामकाजी मेमोरी र व्यायाम आउटपुट बढाउनको लागि पनि परिचित छ। Phoshatidylserine लाई मुड र स्लीप बूस्टर पनि भनिन्छ। यी सबै कारणहरू र अधिकको कारणले, गत केही बर्षहरूमा फास्फेटिडेल्सिन सप्लीमेन्टहरूको लागि माग बृद्धि भएको छ।
सही खुराक फास्फेटिडेल्सिन (PS) यसको फाइदामा निर्भर गर्दछ जसको लागि यो लिइएको छ। सामान्य सहमति यो छ कि १०० मिलीग्रामको एक मानक डोज, दिनको तीन चोटि लिईन्छ, यसैले दैनिक 100०० मिलीग्राम, संज्ञानात्मक गिरावटको बिरूद्ध दुवै सुरक्षित र प्रभावकारी छ। अर्कोतर्फ, जब फास्फेटिडेल्सेरिन एडीएचडीको उपचारको लागि प्रयोग भइरहेको छ, प्रति दिन २०० मिलीग्रामको एक मानक खुराक बच्चाहरूको लागि आदर्श मानिन्छ र प्रति दिन mg०० मिलीग्राम वयस्कहरूको लागि आदर्श मानिन्छ। अल्जाइमरको लागि, -300००--200०० मिलीग्रामको खुराक आवश्यक मानिन्छ। यदि एक फास्फेटिडेल्सेरिन पूरक व्यायाम आउटपुट सुधार गर्न प्रयोग भइरहेको छ भने, प्रयोगकर्ताहरूलाई दिनको mg०० मिलीग्राम खुराक सीमा नाघ्न भनिन्छ।
तपाईं प्रति दिन PS को पूरक लिन सक्नुहुन्छ 10 दिनको लागि ब्लन्टेड कोर्टिसोल प्रतिक्रिया अघि र व्यायाम-प्रेरित तनावको बखत।
कोर्टिसोल एक स्टेरॉयड हार्मोन हो जसले शरीरभर प्रक्रियाहरूको विस्तृत श्रृंखलालाई नियमित गर्दछ, मेटाबोलिजम र प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सहित। यो तनाव प्रतिक्रिया गर्न शरीर मद्दत मा एक धेरै महत्वपूर्ण भूमिका छ।
वाणिज्यिक सोयाबीन व्युत्पन्न लेसिथिनको प्रमुख कम्पोनेन्टहरू: ––-––% सोयाबीन तेल। २०-२१% फास्फेटिल्डिनोसिटोलहरू। १ – -२१% फास्फेटिडेल्कोलीन।
सोफा लेसिथिनमा फोस्फेटिडेल्सेरिन भेटिन्छ लगभग%% कूल फास्फोलिपिडहरू।
फॉस्फेटिडेल्सेरिनले प्रारम्भिक चरणमा कार्य गर्दछ, जब कोर्टिसोल स्तर उच्च हुन्छ। यो उत्तम लिन्छ जब कोर्टिसोल स्तर उच्चतममा हुन्छ। उदाहरण को लागी, तपाइँ काम को दबाव को कारण एक तनाव राज्य मा जाग गर्दै हुनुहुन्छ? चिन्ता र बढेको तनावबाट बच्न बिहान लिनुहोस्।
फास्फेटिडेल्सेरिन (PS १००; सुत्ने समयमा एक देखि दुई लिनुहोस्)। फास्फेटिडेल्सेराइन एक फास्फोलिपिड न्यूट्रिशियल सप्लीमेन्ट हो जसले शरीरमा कोर्टिसोलको उच्च गतिशील उत्पादन रोक्दछ, जसले अस्वस्थ, माथि उठेको कोर्टिसोलको स्तर घटाउँछ, र यसको फलस्वरूप, थप आरामदायी निन्द्रा आउँछ।
फास्फेटिडेल्सेरिन लिदा z-१२ हप्ता उपचार पछि अल्जाइमर रोगका केहि लक्षणहरू सुधार गर्न सक्छ। यो कम गम्भीर लक्षण भएका मानिसहरूलाई राम्रोसँग देखिन्छ।
Phosphatidylserine ले अनिद्रा र पेट दुख्ने जस्ता साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ, विशेष गरी 300 mg भन्दा बढी खुराकहरूमा। त्यहाँ केही चिन्ता छ कि पशु स्रोतहरूबाट बनाइएका उत्पादनहरूले पागल गाई रोग जस्ता रोगहरू फैलाउन सक्छ। फोस्फेटाइडिल्सिरिनले अनिद्रा र पेट दुख्ने जस्ता साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ, विशेष गरी 300 मिलीग्राम भन्दा बढी खुराकहरूमा। त्यहाँ केही चिन्ता छ कि पशु स्रोतहरूबाट बनेका उत्पादनहरूले पागल गाई रोग जस्ता रोगहरू सार्न सक्छ।
एल-सेरीन एक एमिनो एसिड हो जो फास्फेटिडेल्सेरिनको संश्लेषणको लागि आवश्यक हुन्छ, जुन मस्तिष्क कोषहरूको झिल्लीको एक अंश हो (अर्थात्, न्यूरन्स)। यो मस्तिष्क सहित शरीरमा उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर आहार बाट बाह्य आपूर्ति आवश्यक स्तर कायम गर्न आवश्यक छ।
सीरिन अभाव विकारहरू एल-सेरीन बायोसिन्थेसिस मार्गको तीन संश्लेषण एंजाइमहरू मध्ये एउटामा त्रुटिको कारण हुन्छ।
तपाईं टायरोसिन पूरक फारममा बेच्न देख्न सक्नुहुन्छ "L" को साथ वा बिना टायरोसिन मानव शरीरको सबै ऊतहरु र यसको धेरै तरलहरुमा अवस्थित हुन्छ। यसले शरीरलाई एन्जाइम, थाइरोइड हर्मोन र छाला र pig्ग मेलेनिन उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ। यसले शरीरलाई न्यूरोट्रान्समिटर उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ जसले स्नायु कोषहरू सञ्चार गर्न मद्दत गर्दछ।
सेरीन एक ध्रुवीय एमिनो एसिड हो जसले पौधाको मेटाबोलिज्म, बोटको विकास, र सेल सaling्केतनमा मौलिक भूमिका खेल्छ। प्रोटीनहरूको लागि भवन निर्माण ब्लकको अतिरिक्त, सेरिनले बायोमोलिकुलसहरूको बायोसिन्थेसिसमा भाग लिन्छ जस्तै एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, फस्फोलीपिड्स, र स्फिंगोलाइपिड्स।
तपाईं खाना पनी फास्फेटिडेलिसेरीनको सेवन बढाउन सक्नुहुन्छ - यो सोया (जो मुख्य स्रोत हो), सेतो सिमी, अण्डाको भुँडी, कुखुराको कलेजो, र गोमांस कलेजो सहित धेरै खाद्य पदार्थहरूमा उपलब्ध छ।
भिटामिन, खनिज, र फास्फेटिडेल्सेरिनमा सूक्ष्म पोषकतत्वहरूले केही महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभहरू प्रदान गर्दछ। फास्फेटिडेल्सेरिन एक antioxidant को रूपमा काम गर्दछ, आफ्नो शरीर मा खतरनाक स्वतन्त्र रेडिकल को प्रभावहरु लाई कम गर्न मद्दत गर्न। यसले तपाइँको मधुमेह र क्यान्सर जस्ता विकासको जोखिमलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
मानव फास्फोलिपिड स्क्र्याम्ब्लेसहरू (hPLSCRs) कुञ्जी सेलुलर प्रक्रियाहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। hPLSCR1 फास्फेटिडेल्सेरिन एक्सपोजर मध्यस्थता phagocytosis द्वारा apoptosis ट्रिगर। hPLSCR3 माइटोकन्ड्रियामा कार्डियोलाइपिन एक्सपोजर मध्यस्थता apoptosis मध्यस्थता गर्दछ।
एल-सेरीन एक एमिनो एसिड हो जो फास्फेटिडेल्सेरिनको संश्लेषणको लागि आवश्यक हुन्छ, जुन मस्तिष्क कोषहरूको झिल्लीको एक अंश हो (अर्थात्, न्यूरन्स)। यो मस्तिष्क सहित शरीरमा उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर आहार बाट बाह्य आपूर्ति आवश्यक स्तर कायम गर्न आवश्यक छ
ल्याक्टोज पर्मेज र अन्य झिल्ली प्रोटीनको असेंब्लीमा फास्फेटिडेलेथोलामाइनले भूमिका निभाउँछ। यसले झ्याम्बाइन प्रोटीनहरूलाई सही ढंगले तिर्तिवन संरचनाहरू तहमा मद्दत गर्न मद्दत गर्नको लागि 'चेपेरोन' को रूपमा कार्य गर्दछ ताकि तिनीहरू ठीकसँग कार्य गर्न सक्दछन्।
धेरै पोलिन पाउँदा शरीरको गन्ध, बान्ता, भारी पसिना र लार, कम रक्तचाप, र कलेजो बिग्रन सक्छ। केही अनुसन्धानहरूले यो पनि सुझाव दिन्छ कि उच्च मात्रामा कोलाइनले हृदय रोगको जोखिम बढाउन सक्छ।
युक्रियोटिक झिल्ली को एक आवश्यक घटक, फास्फेटिडेल्सेरिन (PtdSer), कोष सेल्युलर मा सबै सेलुलर लिपिड को १०% सम्म लेखा मा प्रशस्त anionic फास्फोलाइपिड हो। PtdSer को बारे मा जे कुरा थाहा छ धेरै जसो अपोपोटोसिस र रगत जमाउने कार्यमा exofacial PtdSer ले खेल्ने भूमिका हो।
फास्फेटिल्डिचोलिन हेपेटाइटिस, एक्जिमा, पित्ताशयको रोग, सर्कुलेशन समस्याहरू, उच्च कोलेस्ट्रॉल, र प्रसूतपूर्व सिन्ड्रोम (पीएमएस) को उपचारको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ; किडनी डायलिसिसको प्रभावकारिता सुधार गर्न; प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउनको लागि; र बुढ्यौली रोक्न को लागी।
त्यस्ता प्रोटीनहरूले नकारात्मक रूपमा चार्ज गरिएको फास्फोलिपिडहरू (कार्डियोलाइपिन, फास्फेटिडिलग्लिसरोल, फास्फेटिडिलसेराइन, फास्फेटिल्डिनोसिटोल) तोक्दछ तर zwitterionic वा तटस्थ फास्फोलाइपिडहरू (फास्फेटिडिलेथेनोलमाइन, फास्फेटिडेलिचोलिन) तोक्दैन।
फोस्फोलिपिड्स फास्फेटिडेल्सेरिन (PS) र फास्फेटिडेल्कोलीन, वयस्कहरूको लागि दोस्रो प्रायः समर्थित खाद्य पदार्थहरू हुन् जुन पूरक वयस्कहरूको लागि आहार अनुपूरकहरूको स्मृति गुनासोको साथ हुन्छ।
मौखिक पॉलीअनसेच्युरेट फस्फेटिडेल्कोलीनले स्वस्थ स्वयम्सेवकहरूमा प्लेटलेट लिपिड र कोलेस्ट्रोल सामग्री कम गर्दछ।
संक्षेप मा, फॉस्फेटिडेल्सेरिन कोर्तिसोल स्तर नियन्त्रण गरेर तौल घटाउन सहयोग गर्दछ। यहाँ यसले कसरी काम गर्दछ: तनावको प्रतिक्रियामा, एड्रेनल ग्रंथिहरूले कर्टिसोल भनिने हर्मोन उत्पादन गर्दछ। यो चाँडै रक्तप्रवाहमा प्रवेश गर्दछ र तपाईंलाई राम्रो बाह्य उत्तेजनाहरूको सामना गर्न अनुमति दिन्छ।
हालसम्म गरिएको अनुसन्धानले देखाउँदछ कि फास्फेटिडेल्सेरीन शरीरले राम्रोसँग सहन सक्छ र जब मौखिक रूपमा लिन्छ, यो दैनिक dos०० मिलीग्राम भन्दा बढि दैनिक खुराकको साथ months महिनासम्म फास्फेटिडेल्सेरिन लिन सुरक्षित छ। बच्चाहरूले यी पूरकहरू months महिनासम्म लिन सक्दछन्। जहाँसम्म, दैनिक खुराक 3०० मिलीग्राम भन्दा बढी दिन प्रति दिन को लागी साईड इफेक्स हुन सक्छ जस्तै अनिद्रा र पेट मुद्दाहरूको। गर्भवती र स्तनपान गराउने महिलाहरूले फास्फेटिडेल्सेरिन सप्लीमेन्टबाट टाढा रहनु पर्छ किनकि यी समूहहरूको लागि यी पूरकहरू सुरक्षित छन् भनेर प्रमाणित गर्न पर्याप्त प्रमाणहरू छैन।
धेरै व्यक्तिहरू बिरूवामा आधारित फस्फेटिडेल्सेरिन पूरकहरू रुचाउँछन् किनकि यो विश्वास गरिन्छ कि जनावरहरूमा आधारित पूरकहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई पशुसँग सम्बन्धित रोगहरूमा पर्दाफास गर्दछ। यद्यपि कुनै अनुसन्धान अध्ययनले यस धारणालाई समर्थन गर्न कुनै ठोस प्रमाण फेला पारेन।
चाहे तपाईं कम्पनी हो जसले फास्फेटिडेल्सेरिन सप्लीमेन्ट्स उत्पादन गर्दछ वा कुनै अन्य उद्देश्यका लागि थोकमा फास्फेटिडेल्सेरिन (PS) पाउडर किन्न चाहने एक व्यक्ति हो, किनमेल गर्नको लागि उत्तम स्थान हो। cofttek.com.
कोफ्टेक एक पूरक कच्चा माल उत्पादक हो जुन २०० since देखि बजारमा रहेको छ। कम्पनी उच्च-गुणवत्ताका उत्पादनहरू उत्पादन गर्न प्रतिबद्ध छ र एक अत्यधिक कुशल र अनुभवी अनुसन्धान टोली छ कि जसले खरिदकर्ताहरू उत्तम पाउँदैछन् भन्ने सुनिश्चित गर्न चौबीसै घण्टा काम गर्दछ। उनीहरूको पैसाको लागि गुणस्तरीय उत्पादनहरू। कफ्ट्टेकसँग भारत, चीन, युरोप र उत्तर अमेरिकाका विभिन्न भागहरूमा ग्राहकहरू र ग्राहकहरू छन्। योसँग एक समर्पित बिक्री टोली पनि छ जसले कम्पनीका सबै ग्राहकहरुलाई खुसी ग्राहकहरुमा परिणत गर्ने सुनिश्चित गर्दछ। कोफ्तेकले प्रस्तुत गरेको फास्फेटिडेल्सेरीन पाउडर २ 2008 किलोग्रामको ब्याचमा आउँछ र गुणस्तर र विश्वसनीयताका लागि आँखा चिम्ले भरोसा गर्न सकिन्छ। यसैले, यदि तपाइँ हेर्दै हुनुहुन्छ Phosphatidylserine (PS) पाउडर किन्नुहोस् सामूहिक रूपमा, कहिँ पनि पसल नगर्नुहोस् तर कप्तटेकमा।
(1) PHOSPHATIDYLSERINE (51446१62-9-XNUMX)
(2) प्रकाशित: Phosphatidylserine र मानव मस्तिष्क
(3) व्यायाम मानवमा फास्फेटिडेल्सेरिन पूरकको प्रभाव
(4) एक लेसिथिन फास्फेटिडेल्सेरिन र फास्फेटिक एसिड जटिल (PAS) ले प्रिमेन्स्ट्रल सिन्ड्रोम (PMS) को लक्षणहरूलाई कम गर्दछ: एक अनियमित, प्लेसबो-नियन्त्रित, डबल-ब्लाइन्ड क्लिनिकल परीक्षणको नतीजा
()) साइन्सडाइरेक्ट: फास्फेटिडेल्सेरिन
(6) यात्रा अन्वेषण को लागी उदा।
(7) Oleoylethanolamide (oea) - तपाईंको जीवनको जादुई छडी।
(8) आनंदमाइड बनाम सीबीडी: कुन तपाईंको स्वास्थ्यको लागि उत्तम छ? तपाईंले उनीहरूको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा!
(9) निकोोटोनामाइड राइबोसाइड क्लोराइडको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा।
(10) म्याग्नेशियम l-थ्रोनेट पूरक: लाभ, खुराक, र साइड इफेक्ट।
(11) Palmitoylethanolamide (मटर): लाभ, खुराक, प्रयोग, पूरक।
(12) शीर्ष health स्वास्थ्य लाभहरू रेवेराट्रोल पूरकहरूको।
(13) पायरोलोक्विनोलिन क्विनोन (pqq) लिने शीर्ष5फाइदाहरू।
(14) अल्फा gpc को सबै भन्दा राम्रो nootropic पूरक।
(15) निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (एनएमएन) को उत्तम एन्टी एजिंग पूरक।